सुशान्त सिंह राजपूतको विवाह नोभेम्बरमा हुनेवाला थियाे, काे थिइन् त उनकी हुनेवाला दुलही ? – Jagaran Nepal
सुशान्त सिंह राजपूतको विवाह नोभेम्बरमा हुनेवाला थियाे, काे थिइन् त उनकी हुनेवाला दुलही ?
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतको निधनले सारा बलिउड शाेकमा छ। बलिउडको एक ठूलो स्टार मानिने अभिनेताले आफ्नो जीवनको अन्त गरे। सुशांत सिंह राजपूतको विवाह यस बर्ष नोभेम्बरमा हुनेवाला थियाे । हो, सुशांत सिंह राजपूतका काका पन्ना सिंहले आजको कुराकानीको क्रममा अभिनेतालाई छिट्टै विवाह गर्नेवालालाई बताएका छन्। पन्ना सिंहका अनुसार विवाहको तयारी पनि घरमाै सुरु भएको थियो।
सुशांतको जन्म बिहारमा भएको हुनाले सुशांतका धेरै नजिकका साथीहरूले अभिनेताको विवाहमा आउन तयारी गरेका थिए। यदि पन्ना सिंहका अनुसार, घरमा धेरै रमाइलो वातावरण थियो। सुशांत सिंह राजपूत कोसँग विवाह गर्ने भैन्, उनी एक बलिउड अभिनेत्री वा अरु कोही थिइन, अहिलेसम्म केही बताइएको छैन। तर यो पक्का भयो कि अभिनेता विवाह गर्नका लागि मुडमा थिए।
सुशांत गए पछि परिवार का सबै सपनाहरु चकनाचूर भयो। मुम्बईदेखि बिहारसम्म, शोकमा डुबेको मात्र देख्न सकिन्छ। सबैले यस अद्भुत अभिनेतालाई सम्झिरहेका छन्। मुम्बई प्रहरीका अनुसार सुशांत सिंह लामो समयदेखि नै डिप्रेसनमा थिए। उनको लागि डिप्रेसन के थियो, यो अझै स्पष्ट छैन। तर पुलिसले यस विषयमा राम्ररी अनुसन्धान गरिरहेको छ।